Lockheed L-1049 Super ìgwè kpakpando
Lockheed L-1049 Super ìgwè kpakpando 3 afọ 5 ọnwa gara aga #141
Gịnị bụ ihe nzuzo nke na-efe efe nke a ụgbọelu n'elu 5-6 nkeji na-enweghị zuru ezu engine ọdịda? Ọ bụghị nanị otu engine na a oge, ma ihe niile otu mgbe. M na mgbe nwere a ebe n'ime obi m, n'ihi na ha, karịsịa mgbe a kpam kpam agha mmiri isi awọ, recon ụdị (na nnukwu spinning Rada diski) ga-efepụ anyị n'ụlọ nke Naval Air Station papa m guzo.
Lockheed L-1049 Super ìgwè kpakpando 3 afọ 5 ọnwa gara aga #142
M nwere otu nsogbu na-enyi m. E nwere otu magburu onwe ngwọta: nkịtị ìgwè kpakpando (bụghị super) na-na-efe efe na-enweghị emehie ...
Lockheed L-1049 Super ìgwè kpakpando 3 afọ 5 ọnwa gara aga #144
Daalụ maka gị azịza. M na ọ bụ na ntuziaka - na - rụọ ọrụ, (n'ime "na-agụ-m) ghara gafere a ụfọdụ RPM ojiji na-esonụ na-ahụ-anya, kama, na nke ahụ agaghị ekwe omume .... ya dị nnọọ dara n'ala; kwesịrị niile ike anọ n'elu. Ugbu a niile m na-eme bụ chepụta otú ịkọrọ pix na unu.
Ọzọ, na-ekele gị PAYSON
Lockheed L-1049 Super ìgwè kpakpando 3 afọ 5 ọnwa gara aga #161
mere ị na-emeghe cowl flaps?
Lockheed L-1049 Super ìgwè kpakpando 3 afọ 5 ọnwa gara aga #162
Dị nnọọ na-agbalị na-emeghe cowl flaps .... mgbe ọkụ na-elu-ọ rigoro ngwa 4K, mere a n'aka azụ isi. Asatọ n'ime ụgbọ elu, agụụ gauges malite ịga ala otu otu. Soooo, mgbe 8 nkeji, ọ ama esịn ka a nkume. Ma, hey, nke ahụ bụ a ndekọ. Daalụ maka Ama ezie, m na-ekele ya.
Lockheed L-1049 Super ìgwè kpakpando 3 afọ 5 ọnwa gara aga #165
M “ole” FB otu maka FSX. Aga m ajụ ajụjụ maka ya
Ọbụna ole na ole buddies bụ ndị maara oru na-efe efe na-B-17, otú ahụ ka m ga-elele na ha oke
The Connie bụ esote nnụnụ m na-agbakwụnye na VA si nsoro, otu ugboro m ga-esi ike nke anyị nnụnụ-akwụ ya ụgwọ.
Enwetara m ugbu a ịkwụ ụgwọ 767-200ER, nke na-ahapụ 748Fs abụọ ahụ na 772LR abụọ ahụ. 744LCF anyị na 748s bụ ndị isi anyị na-ere ego, ọ bụ ezie na 772LR mgbe ụgbọ elu a na-akwụ ụgwọ kwesịrị ekwesị nwere ike iwetara gị ezigbo ụgwọ ọrụ lol N'ezie, onye na-esote ọ bụghị ruo n'August na n'oge ahụ, m ga-enwe nnụnụ ahụ kwụsịrị lol
Lockheed L-1049 Super ìgwè kpakpando 3 afọ 5 ọnwa gara aga #178
Chaị Mọ ... dị mma na ekele maka nchegbu. Aaaaah, B-17 si. M na-emekarị-agba na otu ohere ọ bụla m ga-esi. Ọ bụrụ na ị na mgbe na-a ohere na-agba ịnyịnya onye maara dị ka "The Aluminium kwujuru akwuju", mee ya. (Ma ọ bụrụ na i nwere na-adịghị ama) Ọ e wuru mbubreyo na agha na ẹka England. Dị ka akara aka ga-enwe ya, agha ahụ biri na ya mbata. Ya mere, mgbe na-eji na mgbalị agha. Ọ bụ nnọọ dị ebube n'ime na. All osisi walkways na ọdụ egbe Trolley dị ka mgbe na-eji. Lee ya na akara aka ịhụ ebe ọ ga-ịgagharị. Ọ bụrụ na ị na-a na-agba ịnyịnya, na-akpa na akara (m mere wee bupụ na ala a na-awụlikwa elu oche nri n'azụ pilot), na maa mee ka ndị gị ezigbo igwefoto.
Lockheed L-1049 Super ìgwè kpakpando 3 afọ 4 ọnwa gara aga #186
Site na faịlụ README maka connie. Soro ndị a ma ị ga-adị mma. Ịkwesịrị ịhazigharị PROP maka RPM kwesịrị ekwesị iji chebe gị pụọ na nsogbu.
(5) Right-pịa ego-akara simicon na-akpọ elu a zuru ezu ọnọdụ window
na-egosi mkpa engine na ụgbọ elu readouts.
(7) Engine ọdịda yiri ka ime mgbe ndị engines na-ejikwara na
2800 + RPM maka ogologo oge (lee anya n'ihi na nke a karịsịa
mgbe iri-apụ) ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ebua akara = tupu 2400 + RPM. dabere
na elu, engines nwere ike ida n'ime atọ ka nkeji ise. jiri
Prop pitch nwe menjuobi ma ọ bụ na-Engine pitch simicon ịgbanwe RPM ka
choro maka ugbu a ụgbọ elu ọnọdụ (lee checklist). na
Status panel, na engine HP readout eji ndị na-esonụ na agba Koodu:
acha ọcha - OK, ọ dịghị ihe ize ndụ nke nkedo engine;
edo edo - ugbu a ike ọnọdụ ga-eme ka mmebi ma ọ bụrụ na ekpe kwa ogologo
na a nhazi (ọbụna mgbe throttling azụ ma ọ bụ ukpụhọde
RPM ọ ga-anọgide na-acha odo odo ruo mgbe esịtidem engine ọdịda
Counter bụ azụ efu (nwere ike iri a di na nwunye nke nkeji)
acha uhie uhie - ngwa ngwa a choro - belata ngbasi ukwu na uzo.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: tdhelpline
Lockheed L-1049 Super ìgwè kpakpando 3 afọ 4 ọnwa gara aga #187
tnig .... ekele maka Ama, ma otu ajụjụ - ọ dịtụwo mgbe i n'ezie mere ihe a? Ọ dịghị iwe, ma m na-agbalị ya na mgbe rigoro gara aga 1200 ft. Si na-ekpo ọkụ na-elu-na runway. Ọ bụ eleghị anya naanị m, kama ọ bụ naanị na onye m nwere nsogbu (35 - 45 ụgbọ elu si ebe a). Ahụ na-agụnye ụfọdụ n'ime ndị kasị ibu Boeing, lockheed, ma ọ bụ ndị Russia nwere na-enye. M na-eche m zutere na egwuregwu na ya gburu mmụọ m. M na-eche "ika x" nwere otu na-enye. M ga-enye ya a laa, ma ọ bụrụ na m na-ada (Rip), agwa nwunye m na ọ bụ nri.
Ọzọ, ekele na ekele, PAYSON
Lockheed L-1049 Super ìgwè kpakpando 3 afọ 4 ọnwa gara aga #188
na-eme ka a Super Connie? M nwere ike na-enwe a lee anya na ya onwe m akpa ọchị
Oge ike page: 0.276 sekọnd